QD3900H1 Ikhamera yedokhumenti yombhede ohlotshisiwe
I-QIT600F2 Ukubhala ithebhulethi esebenzisanayo
Le khamera yombhalo ophathwayo iyona evumelana nezimo. Nge-gooseneck egobekayo, izobonisa into kunoma iyiphi i-engeli futhi ivumelane nesibonakhulu.
Ngememori yangaphakathi, ungagcina izithombe ezithwetshuliwe nevidiyo ngaphandle kwesidingo sokuthinta ikhompuyutha. Le khamera enencazelo ephezulu ingasetshenziswa ngokuphindwe kabili njengesishintshi/isikali!
Qaphela: Sisekela uhlobo lwe-Qomo lwedemo kuyilapho ekukhiqizweni ngobuningi samukela i-OEM/ODM
Izinketho zokuxhumana ezinothile
I-QPC80H2 isibonisi sekhamera yedokhumenti ye-gooseneck kuze kube manje iyikhamera yedokhumenti yekilasi enezici ezigcwele kakhulu. Ukuxhumana kwe-VGA ne-HDMI kukuvumela ukuthi urekhode ividiyo noma isithombe. Izixhumanisi zinikeza ukuguquguquka okukhulu kakhulu. Ngezinketho zayo eziningi zokuxhuma, i-Qomo ihlanganisa kalula nobunye ubuchwepheshe bekilasi.
Izinkinobho ezilula nezihlakaniphile ne-USB slot ngemuva; Ngakwesokunxele kukhona i-USB-A ye-USB thumb drive kanye ne-USB-B slot yokuxhumeka kwe-PC
Ingalo ye-Gooseneck ingama-445 mm ene-gooseneck yamahhala ema-engeli ahlukene
I-HDMI eminingi ngaphakathi/ngaphandle kwembobo ohlangothini olungemuva
I-VGA eseceleni ngaphakathi nangemuva isandiso sokusekelwa komlenze ngemuva
Ekhanda umbhobho. Ngakho awukwazi ukurekhoda kuphela isithombe kodwa futhi izwi ekurekhodweni kwevidiyo
Ikhamera engu-5MP ene-6xoptical zoom kanye ne-10xdigital zoom. Ukukhanya okungeziwe okuhlakaniphile kwe-LED okwakhelwe ngaphakathi, ukukhanya okuqondisa konke, ukudala inkambu yokubonisa ecacile yombono
Ukwenza izinto ezincane zibe zinkulu kunokuphila
Le khamera ephathekayo yakhelwe ukubukwa. Buka izinto kunoma iyiphi i-engeli ngesikhathi sangempela noma ngenkathi ungekho ngokurekhoda ividiyo enencazelo ephezulu, futhi ulethe ukusondeza kwayo okunamandla okungu-6x ezingeni elilandelayo ngokuyimatanisa nesibonakhulu.
Usayizi we-A3 wokudubula
Ngendawo yokuskena ephezulu engu-A3, ungakwazi ukuskena cishe yonke into oyidingayo ekilasini.
Inikezwe ngesoftware yamahhala ye-Qcamera
Kuyisoftware yesithombe/isichasiselo/ividiyo. Iyahambisana Windows 7/10.Mac
Ibha yamathuluzi elula nefushane.
Uma uvula isofthiwe, isetshenziswa kalula ngebha yamathuluzi kusixhumi esibonakalayo njenge-zoom in/freeze/timer
Isichasiselo sesikhathi sangempela
Ukwenza kalula isikrini esihlukanisayo sokuqhathanisa isibonisi esiguqukayo nesimile esenza usizo olukhulu ekufundiseni. Abafundi bangaba nombono ocace kakhulu wokuthi uyini umehluko esibukweni.
Umsebenzi wesichasiselo wenza isichasiselo sakho kalula noma yini ofuna ukwabelana ngayo esikrinini.Futhi wenze ikilasi lihlanganyele kakhulu.
Olandelayo: Ikhamera yedokhumenti ye-QPC80H2 5MP yekilasi elihlakaniphile
Okwedlule: I-Qomo HD USB Webcam Yokudlala
Isibonisi Sekhamera Yedokhumenti
Isibonisi Seskena Sombhalo
Ikhamera Yedokhumenti Yesibonisi
I-QCamera User Manual MAC
QCamera V1.5 Incwadi Yomsebenzisi
I-QPC80H2 Incwadi Yomsebenzisi yekhamera
QPC80H2 Gooseneck idokhumenti incwajana yekhamera